“Maaltu ajandaa akka naannoon keenya jabaattu taasise yoo jettani, hojii keenyaa miti hojii diinaati- jedhe Dr. Abiyyi Ahimad – Kichuu
HomeAfaan OromooTV“Maaltu ajandaa akka naannoon keenya jabaattu taasise yoo jettani, hojii keenyaa miti hojii diinaati- jedhe Dr. Abiyyi Ahimad
“Maaltu ajandaa akka naannoon keenya jabaattu taasise yoo jettani, hojii keenyaa miti hojii diinaati. Gaafa namni tokko ka’ee obbo Lammaa Magarsaa ABO’dha jedhee barreessu oromoon ni sassaabama.” jedhe Dr. Abiyyi Ahimad
Dubbii Ilma Abbaa Gadaa kana qalbiidhaan dhaggeeffadhaa.
Amma dubiin isiin galte laata???
“Waan waliin dhabne malee waan irratti waldhabne hin qabnu” dubiin Kunii nama oromoo ta’e kamiifu ifa dha dhugaan jirus kanuma.
Dinni keenya nutti jira nutti imoo walitti jira yaa ilmaan oromoo yaa ilmaan ayyaa lukka walii jala harkisuu dhisa gadii ta’aa waliin mari’adha waan ummaata oromootti ta’u fidda bu’aa dhunfaa dhisa bu’aa ummaata oromoo irraatti xiyyefadha.
Antuu beka fi anaattu shekka jechuu dhisa qabsayaan dhugaa anaa male hin jiru jechuu dhisa dinni nutti kolfaa jira kanaaf dinna keenya balbalaa hin banina tokkummaa cimsa gargaruma jiddu keessan jiru xiqqessa.
Carran ammaa argame kunii debi’ee dhufu dhabu dandaa’a wanti haridha jiru boru hin jiru gafa harkaa nuu bate gabii dhan debite hin dhufutu gafa sanii tunnu hin jirutti gafa sanii kaan caallaa walii irraatti duluttu dhufaa walii ajifatutu dhufa situ balesse situ balessettu dhufa kanafuu walii haa tannu tokko tanne dinna keenya irraatti qabsoofnaa.
“kan yoo bira rukutan hin dhageenye yoo dirra rukutaniis hin dhagayu” mammaksa Oromootti
Qabsoo ummata Oromoo duubatti deebisuuf diinni keenya rafee bulee hin beeku . Warri ummata Oromoo cunqursaa turan karaa qaxxaamuraan aangotti deebi’anii dhufuufnamoota isaaniif amanamoo tahan guyya guyyaan leenjisanii bobbaasaa jiran .Hayyoonni Oromoo rakkoolee diinni akka tokkummaan keenya baduuf uumu kana akka hin milkoofneef dursanii ummata oromoof hubannoo kannuu qaban .
PMNO Lammaa Magarsaa
”Biyya olaantummaan seeraa itti dhabame keessatti barattoonni Tigraay naannoo isaanii irraa ala deemanii barachuu hin qabani.”
Dhaadannoo isa guddicha har’a hiriira Maqalee keessatti dhaadatamaa oolee dha. Toftaan jarri ittiin hoggansa haaromsaa kana fudhatama dhowwataa jiran bifa kanaan ta’uu isaati.
Jarri akkanatti nu jala deemanii keessa keenya laalaa jiru. Ibsoonni jaarmayaalee Oromoo kun osoo ibsa walii galtee calaqqisu tahee
Biyyà Mootummàan sadii jiru keessatti hidhannoo dhabuun salphina!